Exodus 39 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wɔyɛɛ asɔfo ntaade no (1)
Efɔd no (2-7)
Nkatabo no (8-21)
Nsasin no (22-26)
Asɔfo no ntaade a aka (27-29)
Sika kɔkɔɔ traa no (30, 31)
Mose hwɛɛ ɔsom ntamadan no ho biribiara sɛ eye anaa (32-43)
39 Wɔde hama bruu, hama afasebiri, ne hama kɔkɔɔ+ no nwenee ntaade kama a wɔde bɛsom wɔ kronkronbea hɔ. Wɔpam ntaade kronkron no maa Aaron,+ sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 2 Ɔde sika kɔkɔɔ, hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera yɛɛ efɔd*+ no. 3 Wɔde hamma* boroo sika kɔkɔɔ yɛɛ no ntraantraa, na otwitwaa no nteanteaa de kaa hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera no ho de nwenee efɔd no. 4 Wɔyɛɛ ade totoo ne mmati no so de kaa anim ne akyi no boom. 5 Sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no, wɔde sika kɔkɔɔ, hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera no ara bi nwenee abɔso* de bɔɔ efɔd no mu; ɛno na wɔde bɛkyekyere abom kama.+ 6 Afei wɔde abohene tuntum no tetaree biribi te sɛ nsiase nketewa bi a wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ so, na wɔkyerɛw* Israel mma din wɔ so sɛnea wɔkyerɛw ade wɔ ahyɛnsode so no.+ 7 Ɔde sisii efɔd no mmati so sɛ wɔmfa nyɛ nkae abo mma Israel mma,+ sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 8 Afei ɔde sika kɔkɔɔ, hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera nwenee nkatabo+ no te sɛ efɔd no.+ 9 Sɛnea wɔyɛɛ nkatabo no, sɛ wobu to so abien a, n’afã anan nyinaa yɛ pɛ, ne tenten yɛ nsayam abiɛsa,* na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ nsayam abiɛsa. 10 Wɔde abohene tetaree mu, na na ɛsesã so anan. Ná nsãso a edi kan no yɛ abohene kɔkɔɔ, topas abohene, ne ahabammonobo. 11 Nsãso a ɛto so abien no, na ɛyɛ nsrammabo, hoabo, ne ahwehwɛbo. 12 Nsãso a ɛto so abiɛsa no, na ɛyɛ akutuhonobo, mfrafraebo, ne beredumbo. 13 Ná nsãso a ɛto so anan no yɛ sikaberebo, abohene tuntum, ne abohene ahabammono. Wɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nsiase de abohene no biara tetaree so. 14 Israel mma 12 no, ɔkyerɛw wɔn mu biara din wɔ ɔbo baako so. Ɔkyerɛw no sɛnea wɔkyerɛw ade wɔ ahyɛnsode so, na ɔde ebiara gyinaa hɔ maa Israel mmusuakuw 12 no mu baako. 15 Afei wɔde sika kɔkɔɔ amapa nwenee biribi te sɛ hama totoo nkatabo no anoano hyiae.+ 16 Wɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nsiase abien ne nkawa abien, na wɔde nkawa abien no hyehyɛɛ nkatabo no ano wɔ ha ne ha. 17 Afei wɔde nhama abien a wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ no hyehyɛɛ nkawa abien no mu wɔ nkatabo no ano wɔ ha ne ha. 18 Ɛnna wɔde sika kɔkɔɔ nhama abien no fã a aka no faa efɔd no anim kɔhyehyɛɛ nsiase no mu wɔ efɔd no mmati so. 19 Wowiei no, wɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nkawa abien de hyehyɛɛ nkatabo no fã a wɔabu ato so no anoano.+ 20 Ɛnna wɔsan de sika kɔkɔɔ yɛɛ nkawa abien hyehyɛɛ efɔd no mu wɔ baabi a abɔso no bɔ efɔd no mu no. Ná ɛwɔ abɔso no soro kakra. 21 Afei nkawa a ɛwɔ efɔd no mu no, wɔde hama bruu hyehyɛɛ mu, na wɔsan de kyekyeree nkatabo no nkawa mu bɔɔ efɔd no mu, sɛnea ɛbɛyɛ a nkatabo no bɛda efɔd no so yiye wɔ abɔso no soro, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 22 Afei nsasin a ɛwɔ efɔd no ase no, ɔmaa obi a ɔnwene ade nwenee; ɔde hama bruu nkutoo na ɛyɛe.+ 23 Wotwaa ataade no mfinimfini de yɛɛ ne kɔn te sɛ dade akotaade kɔn, na wɔnwenee ano hyiae sɛnea ɛbɛyɛ a ɛrentew mfa mu. 24 Ɛno akyi no, wɔde hama bruu, hama afasebiri, ne hama kɔkɔɔ nwenee granate akutu* sensɛn nsasin no ano hyiae. 25 Afei wɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ adɔmma hyehyɛɛ granate akutu no ntam wɔ nsasin no ano hyiae; 26 enti granate akutu biara akyi no, sika kɔkɔɔ adɔmma toa so; wɔde sesãã so wɔ nsasin a wɔde yɛ asɔfodwuma no ano hyiae, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 27 Afei wɔmaa obi a ɔnwene ade de nwera pa nwenee ntaade tenten maa Aaron ne ne mma,+ 28 na wɔde nwera pa no bi nwenee abotiri,+ abotiri a wɔadi adwini agu ho,+ ne nika,*+ 29 na wɔde hama papa a wɔde yɛ nwera, hama bruu, hama afasebiri, ne hama kɔkɔɔ nwenee nea ɔde bɛbɔ ne mu, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 30 Wowiei no, wɔde sika kɔkɔɔ amapa yɛɛ ade tratraa hyɛnn bi, ahosohyira sɛnkyerɛnne kronkron* no, na wɔkyerɛw so sɛnea wɔkyerɛw ade wɔ ahyɛnsode so no. Wɔkyerɛw so sɛ: “Yehowa ne Ɔkronkronni no.”+ 31 Wɔde hama bruu soo mu de bɔɔ abotiri no anim, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. 32 Enti afei ɔsom ntamadan no, kyerɛ sɛ, ahyiae ntamadan kronkron no ho adwuma nyinaa baa awiei, na Israelfo no yɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no nyinaa.+ Wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. 33 Ɛnna wɔde ɔsom ntamadan+ no ho nneɛma nyinaa brɛɛ Mose: ɛho ntama, emu nneɛma, ɛho nnade nketewa,+ ntamadan nnua+ no ne ne mmeamu,+ ɛho adum ne ne nnyinaso;+ 34 nkataso a wɔde adwennini nhoma a wɔahyɛ no kɔkɔɔ+ ayɛ, nkataso foforo a wɔde sukraman* nhoma ayɛ, ntwamutam no;+ 35 Adanse Adaka no ne nnua a wɔde soa+ ne ne mmuaso;+ 36 ɔpon no ne ɛho nneɛma nyinaa+ ne paanoo a wɔde kyerɛ; 37 kaneadua a wɔde sika kɔkɔɔ amapa ayɛ ne ɛho nkanea+ a ɛsesa so no, ne ɛho nneɛma nyinaa,+ ne ngo a wɔde begu nkanea no mu;+ 38 sika kɔkɔɔ afɔremuka no,+ ɔsrango no,+ aduhuam no,+ ntama*+ a wɔde bɛsɛn ntamadan no kwan ano; 39 kɔbere afɔremuka+ ne kɔbere nkantankantan a ɛda so no, ɛho nnua a wɔde bɛsoa+ ne ɛho nneɛma nyinaa,+ ɔsɛn no ne ne nnyinaso;+ 40 ntama a ɛsensɛn adiwo hɔ ne n’adum ne ne nnyinaso,+ ntama*+ a ɛwɔ adiwo no kwan ano, ne ɛho nhama ne nea wɔde bɛbobɔ ntamadan no mu atim fam,+ ne nneɛma a wɔde bɛyɛ ɔsom ntamadan no, kyerɛ sɛ, ahyiae ntamadan no mu adwuma nyinaa; 41 ɛne ntaade a wɔanwene no kama a wɔde bɛsom wɔ tenabea kronkron hɔ, ɔsɔfo Aaron ntaade kronkron,+ ne ntaade a ne mma de bɛsom sɛ asɔfo no. 42 Sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no, saa pɛpɛɛpɛ na Israelfo no yɛɛ adwuma no nyinaa.+ 43 Bere a Mose hwɛɛ adwuma no nyinaa no, ohui sɛ wɔayɛ no sɛnea Yehowa kae no pɛpɛɛpɛ. Ɛnna Mose hyiraa wɔn.
^ Anaa “asae; abɔsobaa.”
^ Anaa “wokurukyerɛw.”
^ Anaa “sɛnt. 22.2.” Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “twakoto.”
^ Anaa “ahemmotiri kronkron.”
^ Aboa bi a ɔwɔ nsu mu.
^ Anaa “ntwamutam.”